कोरोनो भाइरसलाई लिएर सी जिनपिंग कति कमजोर छन् ?::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
रोबान क्यालिक प्रकाशित : बिहिबार, फाल्गुन १५, २०७६
काठमाडौँ – ब्राण्ड “पीपुल्स रिपब्लिक चाइना” तनावका साथै समस्यामा अल्झेकाे छ। मानौं तियानानमेन स्क्वायरमा माओ जेदुंगको विशाल चित्र भूकम्पको कम्पनले थरथर काँपिरहेकाे थियाे।
तर यदि भित्रबाट धकेल्याे भने याे वस्तावमा तल झर्नुका साथै पतन नै हुन्छ। कोरोनाभाइरस महामारीबाट जाेगाउन निसन्देह कम्युनिष्ट पार्टी र यसअघिका सबै महासचिव सीलाइ जिनपिङ विश्वासकाे जित्नु छ।
कुनै पनि देश वा सत्तारूढ पार्टीले यस्तै ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्दा संघर्ष गर्छ भने नयाँ वर्षको लागि वार्षिक घरेलु प्रवासनको सामना गर्नुपर्छ। तर पार्टी र यसका नेताले विशेष गरी क्युले “राष्ट्रिय पुनर्संरचनाको चिनियाँ सपना साकार गर्न” नयाँ “युग” प्रवेश गर्ने ठूलो अभिलाषा देखेका छन्।साकार करने के लिए।”
राष्ट्रिय अागुवाहररूले २०१२ मा सीलाई नेताको रूपमा चुनावी भ्रष्टाचार हटाउन र पार्टीलाई शुद्ध पार्नका लागि चुने। उनले पीपुल्स लिबरेशन आर्मीसहित अधिकांश वरिष्ठ अधिकारीहरू प्रतिस्थापित गरेका छन्, जसले उनीहरुलाइ फुजियान र झेजियांगमा प्रान्तीय स्तरमा उनको बृद्धिलाई समर्थन गरे।
सीले पार्टी निजीकृत र केन्द्रीकृत शक्तिकाे लागि पुनर्गठन, गरे। भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको लाभ उठाउँदै उनले केन्द्रीय पार्टीको विशाल निगरानी र नियन्त्रण शक्तिको निर्माण पनि गरेका छन्।
‘स्वर्गको जनादेश’ गुमाउँदै
अब ठूलो प्रश्न यो छ कि यो नवनिर्मित पार्टी संरचना कसरी भयावह कोरोनाभाइरस महामारी विरूद्ध कसरी सामना गरिरहेकाे छ। विशेष रूपले किनभने याे एक आर्थिक मन्दीलाइ पहिला देखि नै अमेरिका र बेइजिङको संघर्ष र झिनजियांग त हंककंकमा आफ्नो अशान्त सीमावर्ती क्षेत्रलाइ वशमा गर्नकाे लागि व्यापार र विधि युद्धबाट बढेकाे छ।
यो तार्किक देखिन्छ कि सीले चीनको आर्थिक वृद्धि र विश्वव्यापी प्रभावको लागि सबै महिमाको दाबी गर्छन, त्यसैले उनले विपत्तिका लागि पनि उत्तरदायी हुनेछन्। यो “स्वर्गको जनादेश” गुमाउने पुरानो शाही खतरासँग फिट हुनेछ – यो धारणा कि एक धर्मी शासकले मात्र देवीदेवताको अनुमोदन पाउँदछ।
तर चिनियाँहरूमा समस्याकाे लागि स्थानीय अधिकारीहरूलाइ दाेषी ठहराउने एक लामाे इतिहास छ। जबकी त्याे समस्या हल गर्नकाे लागि सम्राट वा महासचिवको शक्तिमाथि विश्वास राख्छन्। क्षेत्रीय र व्यक्तिगत गल्तीहरूको बारेमा सयौं हजारौं अझै पनि केन्द्रिय पार्टी नेतृत्वमा निवेदन दिने गर्छन्।
धेरैले अझै पनी मूल्यांकन गर्दै छन् कि वर्तमान संकटको लागि कहाँ दोष देखाउन सकिन्छ र उनीहरूलाई आधिकारिक रूपमा भनिएको कुरा स्वीकार्न हिचकिचाउँन्।
मानिसहरू साेशल मिडियामाथि सेन्सर लगाइएकाे सन्देशलाइ राम्राेसँग डाउनलाेड गरिरहेका छन् र साथै पाेष्ट पनि गरिरहेका छन्।जसले “नेट पुलिस” लगातार अजीब-अजीब शोककाे कारण बनिरहेकाे छ।
यसैले वुहान अधिकारीहरूको प्रारम्भिक असफलताले भाइरसलाई द्रुत रूपमा फैलिएपछि चीनमा जनताबीच व्यापक क्रोध जगाएको छ।
पछिल्ला दिनमा, केन्द्र सरकारले हुबेई प्रांत में पार्टी सचिवकाे स्थानमा स्थानीय अधिकारीहरूलाई दोष लगाएको छ। यद्यपि सार्वजनिक रिस र अधिकारीहरूको अविश्वास अझै पनि रहेकाे छ।
सन् २००८ मा ३ लाखभन्दा बढी बच्चा बिरामी परेको मेलामाइन-लेस्ड मिल्क पाउडर कण्ड जस्ता संकट र अहिले कोरोनाभाइरसले आधारभूत वास्तविकतालाई रेखांकित गर्दछ। चीनमा सुरक्षामा खर्च भएका सबै रकमहरूको लागि, यो प्रायः व्यक्तिको लागि मौलिक हक रहन्छ।
व्यापक रूपमा चीनकाे अनुभवकाे साथ सिडनी स्थित व्यापार परामर्शदाता एलिस्टेयर निकोलसले विस्तृत अनुभवको साथ मलाई भने।
चिनियाँ अधिकारीहरूले संकटको कमजोर शुरुवातले ‘धेरै चिनियाँहरूका मुखमा तीतो स्वाद छोडेको छ।’ आफ्नै सरकारसितको विश्वास भंग भइसकेको छ र जसले छोड्नेछन। सयौं लाखौं अझै पनि ठूलो मात्रामा घरमा बस्दै, स्मार्टफोनहरूमा घूरेर, यस्ता भावनाहरू जताततै फैलिन्छ।
सुधार असम्भव छ
सीलाइ राम्राेसँग थाहा भएपनि की वुहान, वुहन एउटा जिल्लामा छ। जहाँ सन् १९९१ मा एक विद्रोह सुरु भएको थियो जसले क्विंग राजवंशको पतन गरेकाे थियाे। आज, चीनको अनलाइन र अफलाइन नियन्त्रणहरूको हदबन्दीले लगभग परिवर्तनलाई इन्कार गर्दछ – वा धम्की पनि – “जनता” बाट आउँछ।
उनलाइ आफ्नै प्रशासनमा भाग लिन विश्वास छैन। तिनीहरूलाई संगठित गर्न कुनै अवसर दिइएन। सन् १९४९ मा सत्ता कब्जा गरेदेखि पार्टीले थप क्रान्तिहरुमा एउटा लाइन तान्यो। पछिल्लो केहि दिनहरुमा जू नामका दुई व्यक्तित्वले चुनौती दिए र यसको परिणाम भोग्नु पर्यो।
नागरिक अधिकारकर्मी तथा शिक्षाविद जु झिइयोंगलाई जीवा भाइरसको प्रतिक्रियाको कारण राजीनामा गर्नकाे लागि सीलाइ बाेलाइयाे र सुरक्षा अधिकारीहरूले गुआंगज़ौमा उनलाई पक्राउ गरे। तथा सिंघुवा युनिभर्सिटीका प्रसिद्ध कानून प्रोफेसर जु झांगरुनलाई लामो आलोचना पोष्ट गरेपछि चीनको राजनीतिक प्रणालीले प्रभावकारी नजरबन्दमा राखिएको छ।
चीनको विदेशमा संकटप्रति आएको प्रतिक्रियाको पनि कडा आलोचना भएको छ, तर यसले पनि बेइजिङमा सिमित तौल लिन्छ।
यसको सट्टा, चीनले विशेष गरी विश्व स्वास्थ्य संगठन जस्ता एजेन्सीहरूबाट यसको प्रशासनले प्राप्त गर्ने र प्रशंसालाई हाइलाइट र राहत दिन्छ। डब्ल्यूएचओका महानिर्देशक टेड्रोस गेबेरियससले हालसालै चीनको “पारदर्शिता” को लागी धन्यवाद दिएका थिए र सीले उनको “प्रकोपको विस्तृत ज्ञान” को लागी विशेष प्रशंसा गरे। त्यहाँ निश्चित रूपले प्रश्नहरू छन् जब सीको ज्ञानको प्रकोप वास्तवमा शुरू भयो।
तर सुरुमा प्रकोपको गम्भिरताको बारेमा अज्ञानता दावी गर्नु भन्दा, शीले एक फरक मार्ग अपनाउने निर्णय गरे। विश्वव्यापी संगठन र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय आवाजले प्रमाणित गरेको अनुसार भाइरसको बिरूद्ध चीनको “युद्ध” माथि जाेड दिदैँ उनले सर्वज्ञानाको प्रथागत दावी र स्थानीय अधिकारीलाई दोष लगाउँदै आएका छन्।
यसका साथ कसले विश्वसनिय मुद्दा लिने छ?
आजको चीनमा, यो बौद्धिक वा सामान्य जनता होइन, तर ९० करोड पार्टी सदस्यहरू छन् जसले यो महामारीको ठोस परिवर्तनको माग गर्दछ वा गर्दैन भन्ने निर्धारण गर्दछ।
र यो अन्ततः ग्यारहवींको वरपरका कुलीन कार्यकर्ताहरूको सानो सर्कलमा निर्भर गर्दछ। जबसम्म शीर्षमा एक कन्फिडिन्स देखा पर्दैन, मध्यम-वर्गीकरण गर्ने पार्टी ब्यवस्थापकहरूको महत्त्वपूर्ण ब्यान्ड कडा बस्नेछ।
‘चीनको लागि मात्र समस्या होईन, तर विश्वको लागि’
प्रणालीको निजीकरण, सीको उत्तराधिकारी दुलहीको अनिच्छुकको साथ, तथापि, स्थिर रूपमा भविष्यको बारेमा पार्टी चिन्ता बढाइरहेको छ। सीले भर्खरै भने,’हाम्रो अर्थव्यवस्थाको दीर्घकालीन ध्वनि बुनियादी फारामहरू परिवर्तन भएको छैन ,उद्रेकको प्रभाव अल्पकालीन हुनेछ।’
तर कोरोनाभाइरसको तेजस्वी प्रभावले सी काे “कायाकल्प” जस्ताे दृष्टिलाइ पटरीबाट उतारलाइ धमकी दियाे – एक चीनी शताब्दीकाे शक्ति र संपन्नता। अर्थशास्त्रीहरूले विचार गरे कि चीनले अब “मध्यम आयको जाल” वसन्त गर्नेछ कि यसले अन्य राष्ट्रहरूको समृद्धिलाई रोकिदिएको छ र “बूढो हुनुभन्दा अघि नै धनी हुने” खतरा छ।
अर्को महिनाको नेशनल पीपुल्स कांग्रेस लगभग निश्चित स्थगन संकटमा रहेको सरकारको अर्को चिह्न हो। राम्रो स्वास्थ्य अनुभूति भए पनि, यस कदमले पिलर स्टेट घटनाहरू पनि अब सीको नियन्त्रणलाई छोड्दैछ भनेर स्वीकार गर्दै राजनीतिक जोखिम सिर्जना गर्दछ।